I-10 yeMaroon e-Top 10 Iingoma zexesha lonke
"Uhamba NjengeJagger" equkethe uKristuina Aguilera (ngo-2011)
I-Maroon 5 no-Christina Aguilera- "Uhamba njengoJagger". Inceba kunye ne-M / Octone
Ekuqaleni kuka-2011 ukuthengiswa kwe-albhamu i- Hands All Over yayidumisekile, kwaye ibonakala ngathi i- Maroon 5 nethemba loshishino liye laphela. I-vocalist u-Adam Levine wasayinwa ukuba abe ngumcebisi kumncintiswano omculo omtsha ubonisa iLizwi . Bambalwa ababukeleyo babikezela ukuba lo mboniso uza kuba yinto ephazamisayo. I-Counter kwizibikezelo, yaqala ukuhlaselwa. Ekuvukeni kwempumelelo yombukiso, iMaroon 5 ibhalele enye entsha "Ehamba NjengeJagger" kunye nomcebisi kunye noKristu Christina Aguilera. Isiphumo sasibambeleleka ngokungenakuphika # 1 ep hit single engumntu owaba yiyona nto ibetha kakhulu kwiqela lomsebenzi ukuza kube yile minyaka kuphela. "Uhamba NjengeJagger" kwakhona wafikelela phezulu kwitshati yomsakazo womntu omdala xa efikelela kwi-10 ephezulu kwimvadiyo yomsakazo omdala nakwidata lokudanisa. Yayinyulo lokunikezelwa kweGraam ye-Grammy ye-Best Pop Duo okanye yeNtsebenzo yeqela.
Ividiyo yomculo ehamba kunye ne "Moves Like Jagger" yayikhokelwa nguJonas Akerlund, owaziwayo ngomsebenzi wakhe noDame Gaga . I-Rolling Stones 'uMick Jagger ibonakala kwisiqwatho somxholo weengxelo zokugcina. "Uhamba NjengeJagger" wawufakwe kwi-special re-release yeeNtloko zonke ngaphaya kokubangela ukuba i-albhamu ikhuphuke kwi-10 phezulu malunga nonyaka emva kokukhululwa kwayo kokuqala.
"Olu Luthando" (2004)
Maroon 5 - "Olu Luthando". Inceba kunye ne-M / Octone
"Lo Mthando" ngokuqinisekileyo ingoma eyajika iMaroon 5 ibe yiinkwenkwezi ze pop. Kwakungowesibini omnye kwiiNgoma NgoJane, i-albhamu yokuqala yeqela. UAdam Levine uthi kubhaliwe kwenye yezona "zihlandlo ezinzima kakhulu zengqondo" zobomi bakhe emva kokuphuka. Ividiyo yomculo ehamba kunye nayo yayingqubuzana kunye ne-Adam Levine kunye nentombi yakhe, umzekelo uKelly McKee. I-Maroon 5 iphumelele i-Grammy I-Award yoPhuculo oluPhambili lwePapa ngo-Duo okanye kwiQela eliQinisekisa "Lo Mthando." Ingoma yafika kwi-# 5 kwi- Billboard Hot 100 ibe yinto yokuqala yephambili yeqela elingu-10. "Olu Luthando" luya kwi # 1 kwimidiyo yomninzi kunye nomntu omdala xa ifikelela kwi-# 3 kwisikwere somntu omdala.
UAdam Levine uthe "Olu Luthando" lunezinye iingoma ezivakalayo ezibandakanya ingoma yesiMaroon. Watshela uRolling Stone , wathi, "Ndacinga ukuba ndandifumana ngaphandle kokucacileyo ukuba yindlela enhle." Amantombazana amancinci aya kuba nandipha, kwaye yayiya kuba neentloko zamakhulu. itoni yezitena.
"Ngenye imini ebusuku" (2012)
I-Maroon 5 yamkela i-reggae ye-sun-splashed yatshitshiswa apha, kwaye umphumo waba liqela elikhulu leqela eliphambili. U-Adam Levine-wabhala ingoma kunye noMax Martin kunye nabasebenzi abahlala kunye nabo uSherback no-Savan Kotecha. "Ngenye imini Ubusuku" basebenzisa iiveki ezithoba kwi # 1 kwiBillboard Hot 100 kwaye bathengiswa ngaphezu kweeikopi ezigidi ezine okwenza i-Maroon 5 ibetha kakhulu. Kwakhona kwafika kwi # 1 kuzo zombini i-radio evamile kunye nomntu omdala. "Ngenye imini Ubusuku" bewela kwiidatteru zeengoma zesiLatini. Ividiyo yomculo ehamba kunye nayo yayikhokelwa ngumqondisi wefilimu uPeter Berg kwaye ibonisa uAdam Levine njengomkhuseli womsebenzi wakhe ophikisana nobomi bendlu yakhe. "Ngenye imini Ubusuku" kwakungomnye weengoma ezi-10 ezithengisa phambili zomhlaba wonke ngo-2012.
"Kunzima Ukuphefumula" (2002)
I-Maroon 5 - "Inzima Ukuphefumla". Inceba kunye ne-M / Octone
I-Maroon 5 yabhala "Inzima Ukuphefumula" phakathi kokudakumba kunye nerekhodi yabo yerekhodi. Iqela likholelwa ukuba linempahla eyaneleyo ye-albhamu yabo yokuqala, kodwa iilebula yababongoza ukuba babhale ngaphezulu. Ukukhungatheka kubonakala ngombala okhungathekileyo uvakalelwa ngoma ingoma, kodwa yinto ebalulekileyo yempumelelo yengoma. UAdam Levine watshela i-MTV, "Le ngoma ivela ngokukhawuleza ekufuneni ukuphosa into ethile. Kwakuyiyure le-11, kwaye iilebula yayifuna iingoma ezingaphezulu. Ukusebenzisa uxinzelelo oluninzi, kodwa ndivuyayo. "
"Okhuni Ukuphefumula" wayengowokuqala okhutshwe kwi-albhamu Iingoma NgoJane waza wazisa iqela labo eliqala ukukhangela ngaphakathi kwi- Billboard Hot 100 kwiintsuku zokuqala. Kwiintsuku zokuqala zeMaroon 5, umculo wabo wawudlala kakhulu i rediyo. "Kunzima ukuphefumula" kufinyelele kwi # 31 kwiretshi enye xa ikhuphukela kwi # # kumntu omdala kunye ne # 5 kwi-radio ephakathi. Inguqulo ye-acoustic ethi "Harder To breath" iqukwe kwiMaroon 5 ka-2004 EP 1.22.03.Acoustic .
"Undenza Ndimangalise" (2007)
I-Maroon 5 - "Inenza Ndimangalise". Inceba kunye ne-M / Octone
I-Maroon 5 yazisa i-albhamu yayo Ayiyi kuba Kungekudala ngaphambi kwexesha elide kunye nomnye "Undenza Ndimangalise." Yaba yintlahlela yokuqala yebhanki engama-1 yokuqala ye-band kwaye yaphumelela i-Grammy Award ye-Best Performance Performance nge-Duo okanye iQela kunye neVocal. Ingoma iquka ukuziva okuxhalabileyo kumzamo wokwenza ibhendi isandi ngakumbi edolophini nakwixesha langoku. UAdam Levine okokuqala wabhala wathi "Undenza Ndimangalise" iminyaka ngaphambi kokuba iqela lithathe isigqibo sokuba lirekhode. Ingoma yayibuyiselwe kwakhona ngenxa yokuba iileyile yerekhodi yayiyithanda. Amazwi athi "Ondenza Ndimangalise" abonakala ngathi anesibini echazayo. Omnye ukukhungatheka kwezopolitiko e-US malunga ne-Iraq War. Okwesibini isingxelo malunga nothando emva kokuba ubuhlobo bube bubi kakhulu. "Undenza Ndimangalise" kwafikelela kwi-10 ephezulu kuyo yonke indawo, kumntu omdala kunye nomntu omdala onomathotholo ngexesha lotshintsha ishadi lomdaniso.
Ividiyo yomculo ehamba kunye nayo yayikhokelwa nguJohn Hillcoat, owayephethe iividiyo ezininzi ze- Depeche Mode . Idutshulwa kwisikhumulo sezindiza saseLos Angeles (i-LAX). Kwiqhotyoshelweyo, ibhanki ibonakala kwisango iM5 kwiMaroon 5.
"I-Payphone" equka iWeb Khalifa (2012)
"I-Payphone" ngowokuqala kwi - albhamu yesi-studio ye- Maroon yesihlanu. Ibhendi yayisebenza nomvelisi uBenny Blanco kwaye yaqalisa ingoma ngokusebenza ngokusebenza kwiLizwi . "I-Payphone" yaqala kwi-# 3 kwi-Bilboard Hot 100 kwaye ekugqibeleni yavuka ku- # 2. Ingoma ifike kwi # 1 kwisediyo yomntu oqhelekileyo kunye nomntu omdala.
Ividiyo yomculo ehamba kunye nayo yanikelwa i-MTV Video Music Awards yokutyunjwa kwiVideos Pop Pop. Kwakukhokelwa nguSamuel Bayer, owaziwa ngomsebenzi wakhe ngoMhla woBuhlaza, waza wadutshulwa njengefilimu yesenzo esincinane. Yenza i-Adam Levine isebenzisa i-payphone, into eqhubekayo ishiyeka kwimihlaba yaseMelika.
I-albhamu i- Overexposed iqalile kwaye ipapashwe kwi # 2 kwidilesi ye-albhamu yase-US. Ekugqibeleni wathola isitifiketi seplatinum yokuthengisa kwaye uthengise iikopi ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.5 e-US kuphela.
IMaroon 5 - "Izilwanyana". Interscope enobubele
"Izilwanyana" zazingumntu wesibini ongatshatanga kwi-albhamu yesi-studio ye-Maroon yesi-5, i-# 1 ye-platinum-certified V. Umlingani uAdam Levine wabhala ingoma kunye noBenny Blanco kunye noMnumzana uMart Martin osebenzisana neShellback. Ividiyo yomculo enegazi elihamba kunye neentloko zamabhaso ezithi zihlambulule abafazi kwaye zizukise ubundlobongela. Yayiqondiswa nguSamuel Bayer, owaziwayo ngomsebenzi wakhe ngoMhla wokuGreen kunye neNirvana. Nangona iphikisana, "Izilwanyana" zaba liqela lesikhombisa elilandeleleneyo lebhola eli-10 eliphambili elithintekayo kwi-# 3. Yaya yonke into eya ku-# 1 kumsakazo omdala kunye nomntu omdala.
Inxalenye ye "Izilwanyana" yayifakwe kwi-TV yoshishino ekukhuthazeni imoto ye-Kia Soul. Ngenxa yoko, le ngoma yayifumaneka njengento yokukhuphela mahala kwixesha lexeshana kwiwebhusayithi ye-Kia.
"Uya Kuthandwa" (2004)
Maroon 5 - "Uya Kuthandwa". Inceba kunye ne-M / Octone
I-Maroon 5 ikhishwe "Iya Kuthandwa" njengomntu wesithathu ongatshatanga kwi-albhamu yabo Iingoma NgoJane . I-slinky, i-soulful sound yayiphendule ibe yintsika yesibini elandelelanayo i- Beatboard Hot 100 yeqela. Kwakuyi-5 ephasayo yase-UK kunye kwaye uthengise ngaphezu kwezigidi ezimbini ezilandwayo. Ingoma yayigcina ibhendi ekhwela kwi-radio yomsakazo, kodwa yayingumntu wayo wokugqibela ukuba adlalwe kakhulu kwirediyo. "Uya Kuthandwa" yafikelela kwi # 1 kwisediyo yomntu oqhelekileyo kunye nomntu omdala ngelixa ifikelela kwi-5 ephezulu kwidata elidala lomhla. "Uya Kuthandwa" wathola ukutyunjwa kweGraam ye-Grammy ye-Best Pop Performance By Duo okanye kwiQela elinamaVocals.
Ividiyo yomculo ehamba kunye nayo yaqondiswa nguSophie Muller kwaye ibonisa ubudlelwane obunxantathu phakathi kukaAdam Levine, intombi yakhe kunye nonina, eboniswa nguKelly Preston. Abaninzi babona ama-echoes efilimu ye-classic I-Graduate kwisiqeshana.
I-mararo 5 - "i-Sugar". Interscope enobubele
"I-Sugar" ikhishwe njengowesithathu ongatshatanga kwi - albhamu yesihlanu ye-studio ye- Maroon yesihlanu. Kwabhaliwe ngokubhaliweyo nguMike Posner noDkt Luke phakathi kwabanye. Ingoma yayiza kufakwa kwii-albhamu zikaMike Posner. UAdam Levine wayenomdla kule ngoma, kodwa uMike Posner wamguqula kwaze kwaba yilapho ireyile yerekhodi ikhetha umculo ohlukeneyo weeMpapasho . UMike Posner wanikezela ngamazwi angemvelaphi kwi-Maroon 5 yokurekhoda.
Ividiyo ehambisana nomculo ebonisa iMaroon 5 njengemikhankaso yemitshato yomtshato inokumdumisa kunye kunye nokugxekwa "kokuhamba." Ngaphandle kokuphikisana, ividiyo yomculo yayiyimpumelelo ebalulekileyo eyenza imibono engaphezu kweebhiliyoni ezimbini kwi-YouTube. "I-Sugar" inyuke kwi # 2 kwi-Billboard Hot 100 ngelixa ivula i-pop pop kunye ne-radio ehamba phambili. Yayinyulo lokunikezelwa kweGraam ye-Grammy ye-Best Pop Duo / yeNtsebenzo yeqela.
"Musa Ufuna Ukwazi" equka uKendrick Lamar (2016)
Maroon 5 - "Musa Ufuna Ukwazi" equka uKendrick Lamar. Interscope enobubele
"Musa Wanna Know" ngowokuqala omnye kwi-studio ye-studio ye-Maroon yesi-5 ezayo ehleliweyo ngo-2017. Ibhande lasebenza nomvelisi uBenny Blanco kunye neqela elikhulu labalobi beengoma. Abaninzi ababukeleyo bakholelwa ukuba i-rap kaKendrick Lamar ibonakale njengento elandelelanayo, kodwa ukubonakala kwakhe kubone ukuba yongeze ngakumbi ingoma kunye nengxelo yakhe ephakamileyo phakathi kwabagxeki nabalandeli be-hip hop. "Awufuni Ukwazi" yayingu-# 6 i-hit hit kwaye yahamba yonke indlela eya ku-# 1 kumntu omdala owayephila ngexesha lomntu, umntu omdala, kunye nomsakazo oqhelekileyo. Iqhekeza kwi-40 engaphezulu kwidata lokudanisa.
Ividiyo yomculo ehamba phambili ekhokelwa nguDavid Dobkin, owaziwa ngomsebenzi wakhe kwi- Wedding Crashers yefilimu, i-spoof ye-video ekhethiweyo ye- Pokemon Go . Amalungu eklasi abonakala njengezidalwa ezivela kumdlalo. USarah Silverman, uShaquille O'Neal, kunye noVince Vaughn bonke benza i-comeo kwi-clip.
Iimpawu ezilishumi ezibalaseleyo zikaFergie
I-13 ezininzi zeRap Rap Albums
Indlela yokusebenzisa i-Kit yokulungisa i-Windshield
Umsebenzi kaKhesari ekugqibeleni kweRiphabhliki yaseRoma
Ngaba Ndifanele ndizuze iSiqinisekiso soLawulo lweTeknoloji yoLwazi?
Ukufundisa Abafundi Abacinga Ngamafilosofi